Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha HAAB oo ka qaybgalay Shir Weyn oo ka Dhacay Fort McMurray ee Alberta
Gudoomiyaha HAAB oo ka qaybgalay Shir Weyn oo ka Dhacay Fort McMurray ee Alberta
Posted by ONA Admin	/ July 31, 2012
(Fort McMurray) – Waxaa shir balaadhan oo ay soo abaabushay Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya ee Wood Buffalo lagu qabtay xarunta weyn kulamada ee Stonebridge Hotel oo ku yaala ubucda magaalada hodanka ku ah gaaska ee Fort McMurray ee Alberta. Shirkaas oo si weyn loo agaasimay, laguna soo bandhigay xaflad heersare ah iyo afur sharafeed qiimo badan, waxaa ka soo qayb galay dad badan oo u dhashay Ogaadeenya iyo shacabada kale ee Soomaaliyeed.
Waxaa kale oo shirkaas ka soo qaybgalay wafdi culus oo uu hogaaminayey madaxa Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada (HAAB) ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO), Halyay Maxamed Cabdi Yaasiin, oo sida oo kale loo garanayo Diirrane. Waxaa wafdigaas ka mid ahaa Dr. Maxamud Ugaas Muxumed oo ah aqoonyahan sare oo u dhashay Ogaadeenya.
Waxaa shirka lagu furay ayaado Qur’aan ah iyo dardaaran Islaami ah oo uu soo jeediyey Sheikh Cabdi Geedi oo ka mid ah culimada iyo odayaasha shacabka Ogaadeenya ee magalaada. Waxaa ku xigay Dr. Muxumed, oo si qiiro badan uga hadlay sababta loo gumaysto dadka iyo dalka Ogaadeenya. Wuxuu aqoonyahanku si qoto dheer u soo bandhigay daraasad cilmiyaysan oo uu ka soo diyaariyey wadankii, isaga oo is-barbar-dhig sameeynaya ayuu halkaas ku cadeeyey in dalka Ogaadeenya uu ka qanisanyahay dalka gumeysta ee Itoobiaya kolka la eego dhawr dhanka oo uu ka mid yahay kheyraadka dabeeciga ah. Waxaaa kale oo ifafaaflo ka bixiyey xaladda Geeska Afrika sida ay noqon karto marka uu is bedel siyaasadeed ka dhaco Itoobiya.
Waxaa xigay oo baahiyaha codka lagu soo dhaweeyay xidhiidhiye-ku-xigeenka Kanada, Halgame Cabdullaahi Cabdi Cabbaas oo xog kooban ka bixiyey Shirka Jaliyadaha Ogaadeenya ee dunida ee sanadlaha ah oo ay Kanada sooryaysay gu’gan. Shirka ayaa 6dii ila 9kii bishan7aad (6-9 July, 2012) ka fulay Toronto. Waxaa uu Halgame Cabaas, xogta ka dib, ku soo dhaweeyey golaha Hoganka HAAB, Halyay Maxamed Cabdi Yaasiin oo sii xiiso iyo xamaasad badan leh kol qudha oo aanan kala go’ lahayn loo sacabiyay.
Waxa uu Hongaanku soo jeediyay khudbad aasaasi ah oo qimo badan xambaarsanayd. Waxa uu Halyaygu ku bilaabay khudbada si ogol xeerka Islaamka oo isoogu dhafan bariidada Muslimiinta, ayaado Qur’aan ah iyo duco. Waxa uu ku xijiyay oo sooyaalka halganka Ogaadeenya ee salka ku haya laga-ma-maarmaanimada helida aayo-ka-talin iyo xoriyad buuxda. Waxaa uu Hogaanku ku celceliyay xaqanimada halganka Ogaadeenya. Wuxuuna soo bandhigay cadaysimo kala duwan oo muujinaya in halganka Ogaadeenya ee ay JWXO hogaaminayso uu yahay fardul-cayn waajib ku ah qof walba oo Soomaali ah iyo mid walba oo Muslima ah oo og meel walba oo uu dunida kaga suganyahayba. Daliilada uu Halyaygu soo xigtay ayaa waxaa ka mid ahaa ilaha ah kala Qu’raanka Kariimka ah, xadiisyada iyo siirada Rasuulka (NNKHA). Waxa uu meeshaas ka cadeeyay in qofka lid ku noqda halganka uu yahay mid ku kufriyay diinta. Sidaas oo kale, jebiyay xeer, hide, dhaqan iyo caado walba oo san oo Soomaali leedahay. Waxa uu Hogaaku ku soo dhaweeyay cidii dood ka qabta in laga qancin doono, hase ahaatee, ma noqon arin dood laga galo kol hadii daliiladu u cadaayeen sida maalin cad.
Waxaa kale oo uu Hogaamiyuhu xusay kol uu khudbadiisa kaga hadlayay dhibabka aanan tiro iyo tusaale midna lagu soo koobi karin ee ku haabsaday shacabka birta ah ee Soomaalida Ogaadeenya in uu sooyaalka halganka shacabka ka mid yahay oo gu yaraan sideed qax oo kala duwan oo loo kala yaqaano xiliyadi: Daraawiishta, Rayadka, Geel Xareyska, Nasrullaah, Geeshka(OLF), Dagaalka Ogaadeenya, Dib u soo Noqodka Qasabka ahaa ee 1991 kolkii ay burburtay Jamhuuriyadii Soomaaliya, iyo qaxa hada socda ee sabab uu yahay taliska dhig iyo dhuxba miiraadka ah ee TPLF ee Itoobiya.
Waxaa kale oo uu Hogamiyuhu soo bandhigay daraasad cimiyeysan oo ku saabsan heshiiskii Itoobiya lala galay 1991kii iyo sida ay uga baxday iyo sababahii hoorseeday in kol kale JWXO iyo shacabka Soomaalida Ogaadeenya lagu qasbo dagaal laga-ma-maarmaan ah kolka uu taliska TPLF ee Itoobiya diiday in Ogaadeenya laga qaado afti aayo-ka-talin.
Sidaas oo kale, waxa uu Hogaanku ka hadlay marxalada ay soo martay JWXO iyo go’aamadii ugu khadhaadhaa ee ay goysay. Waxaa kale oo uu xusay xaalada siyaasadeed ee ay hada ku sugantahay JWXO. Wuxuuna sidaas oo kale sheegay in ay jiraan wadahadalo lagu qaban doono dal kale oo nabad ah oo ay ka soo qaybgali doonaan dowlado shisheeye oo si rasmi ah u dhexdhexaadinaya JWXO iyo Itoobiya. Wadahadalada ayaa lagu wado in ay bilawdaan xili dhow.
Waxaa uu Halyaygu si baxaad weyn uga hadlay sida ayna dowladihii ka jiray Soomaaliya, ka hor Dagaalka Sokeeye ee dilaacay 1991kii, aynan u ogolayn in ay dalka Ogaadeenya u dhiibaan oo ay u saxeexaan xududka Itoobiya iyo Soomaaliya sida ay hada mandaqadaha ka jira Soomaaliya uga duwanaadeen arintaan oo ah meel uga dhac umada Soomaaliyeed. Waxaa uu intaas ku daray in falalka noocaas ay yihiin hagardaamo iyo hagrasho si toos ah loogu hiiliyey cadowga soo jireenka ah ee umada Soomaaliyeed ee ah Itoobiya.
Waxaa uu Hogaanku, dardaaran ahaan oogu bishaareyay dadkii shirka fadhiyay iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed in xoriyada Ogaadeenya ay soo iftay oo laga sugayo in ay Soomaali oo dhan soo dhaweeyaan iyaga oo u teelo dhiganaya isaga oo qof walba oo gu baqay in si guud iyo si gaar ahba loogu hiiliyo halganka xaqa iyo xalaasha ah ee Soomaalida Ogaadeenya.
Waxaa iyaguna kulanka si geesinimo iyo xariir leh oo ga hadlay odaayaal iyo haween qiimo iyo qaayo badan ka leh bulshada Soomaaliyeed sii guud iyo si gaar ahna jaaliyada Fort McMurray iyo aageeda. Waxaa xubnahaas ka mid ahaa Dr Xirsi Cabdikariim Ciyow, Mudane Axmed Jaamac Waranle, Mudane Faarax Ciise iyo Marwo Xaliima Xassan Gasle.
Waxa uu Hogaanku uu in mudo ahba ku marayey qaarada Waqooyiga Amerika kormeer hawleed, isaga oo kulamo badan la yeelanayey bulshoweynta Soomaaliyeed siiba mida umada Ogaadeenya. Hogaamiyaha ayaa si gaar ah ula kulmayay ururada bulshada sida odayaasha, dumarka, dhalinta, aqoonyahanada, culimaa’udiinka iyo hay’adaha samafalka. Waxaa uu shirka Fort McMurray ka mid ahaa shiraarka badan ee uu hogaamiyuhu ka waday qaaradan isaga oo hada ka hor ku soo maray wafdi Edmonton, caasimada Alberta, iyo Toronto, caasimada Ontario iyo magaalooyin kale oo Kanada ku yaala.